Watchsmith maka Apple Watch na-enweta mmelite dị ukwuu | Esi m mac
Toni Cortes | 08/04/2021 20:00 | ọtụtụ
Adịghị enye Apple inye ihe dị ukwuu Libertad ndị ọrụ gị ka ha nwee ike hazie ọdịdị nke ngwaọrụ ha. O werela ya ọtụtụ afọ iji gbagọọ ogwe aka ya ma mesịa nwee ike ịnweta iPhones anyị nwere ike ịhazigharị ihu na ihu ya n'ụdị gam akporo kachasị ọcha
Ma obi abụọ adịghị ya na ngwaọrụ nwere nnwere onwe ijegharị mgbe ọ bịara ịgbanwe ọdịdị ya bụ Apple Watch. Watchsmith bụ ngwa iji wee na-erigbu ndị ọzọ ohere nke mgbanwe ndị a nke visual akụkụ nke ikiri ihuenyo. Ugbu a, ọ ka nabatara mmelite mara mma.
Onye nlezianya, bụ ngwa maka ndị ọrụ Apple Watch na-enye ọtụtụ nhọrọ iji hazie ihu elekere. Ugbu a ka inwetara mmelite buru ibu nke gunyere atụmatụ ọhụrụ.
Ngwa a na - eji ohere nhazi nke ihuenyo Apple Watch wee nwee nsogbu dị iche iche enwere ike ịgbakwunye na ihu elekere, na-agbasa customizations karịrị ihe Apple na-enye na watchOS.
2.0dị XNUMX nke ngwa ahụ na-ewetara ndị ọrụ ya nhọrọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Watchsmith na-ejizi atụmatụ niile eme ihe 7 nche nche, na-ekwe ka arụmọrụ ka mma yana ọtụtụ nsogbu nke otu ngwa ahụ. Ndị ọrụ ga-ahụkwa ụdị mgbagwoju anya ọhụụ maka igosipụta foto, ịkpọ oku 24, kalenda ederede, ụzọ anyanwụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime ngwa ahụ, Watchsmith gosipụtara atụmatụ maka usoro ọzụzụ, eserese, ọnụọgụ obi, kalori, ele kalenda Outlook, eserese dị elu, na ikike ọhụrụ ndị ọzọ. Mmelite ahụ na-egosiputa nhọrọ usoro oge, oge mgbako oge, na akara ngosi emegharịrị.
Watchmmith dị ka free na App Store, ma ụfọdụ atụmatụ chọrọ ndenye ego kwa ọnwa nke 1,99 Euro ma ọ bụ ndenye aha kwa afọ nke 21,99 Euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Watchsmith maka Apple Watch na-enweta mmelite dị ukwuu